Ramadaana Archives - Ibsaa Jireenyaa
May 13, 2018 Sammubani Leave a comment
Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Akkam fayyaa qabdu kabajamtoota hordoftoota keenyaa? Ramadaana, faayda ramadaanaa, walaloo ramadaanaa jechuun interneeti irra akka barbaadaa jirtan WordPress irraa ni argina. Deebii keessan guutullee deebisuu baannu muraasa isaa deebisuuf ni yaalla. Waggaa kana wanta adda ta’e hojjachuuf karoorfannee jirraa? Yoo hin karoorfatin, barruun armaan gadii ji’a Ramadaanaa keessa akka karoorfannu tooftaa muraasa nutti akeekti. Barruulee bara darbee irraa kan walitti funaanamte fi mata-duree hunda jalatti guduunfan dhiyaate jira. Ji’a Ramadaanaa kana keessa maal jijjiruu barbaannaa? Linkii armaan gadi tuquun buusu dandeessu.
Namni karaa deemu imala isaa keessatti tahayyula yoo hin niyyatin, sooma hiikun isaaf ni hayyamama. Garuu tahayyula yoo niyyate, sooma hiikun isarratti haraama. Soomun isarratti dirqama. ( Tahayyula jechuun tooftaa wanta tokko jalaa bahaniin. Karaa deemun ykn biyya biraa deemun sooma jalaa nan baha jedhe yoo niyyate, sooma hiikun isarratti haraama.) garuu namni karaa deemu tahayyula yoo hin niyyatin, yeroo imala isaa filannoo soomu fi sooma hiiku qaba. Read more
Nama barbaachisummaa (ulaagaalee) kanniin guutef soomni isa irratti dirqama. Ishiin/inni Musliima, aaqila (waa hubachuu kan danda’u) ta’uu, umrii saalfannaa kan gahe ta’uu, fayyaa qabaachu, imala (adeemsa) irra kan hin jirre (iddoo jireenyaa kan jiraatu) ta’uu, dubartiif laguu fi nifaasa (dhiiga dahaa) irraa qulqulluu ta’uu qabdi. Namtichi/ dubartiin barbaachisummaa armaan olii guunnan soomni isa/ishii irratti dirqama fi sirriidha. Dhugumatti ramaddi hundaa tokko tokkoon ilaalun irra gaariidha. Isin qophiidha? Kanaafu obsaan dubbisaa. Read more
Akka shari’aatti sooma jechuun fajrii (subii) irraa eegalee hanga aduun seentutti wantoota sooma balleessan irraa of qabuudha. Asitti wanta biraatif kan soomu osoo hin ta’in niyyaan isaa Rabbiin gabbaruuf ta’uu qaba. “ Read more